6 Talaabooyinka si aad u hesho shaqo kaamil ah qaxooti ama soo galootiga ah ee America | USAHello | USAHello
By Muuse Idris May 30-, 2018 Shaqooyinka iyo Careers, Voices
6 Talaabooyinka si aad u hesho shaqo kaamil ah qaxooti ama soo galootiga ah ee America
Samaynta ugu baxay raadinta mustaqbalkiisa: Sidee baad u aragtaa in aad shaqo kaamil America?
Guud, shaqo ee America helo qaxooti ama soo galootiga ah waa geedi socod adag. Newcomers yimaadaan si ay Maraykanka oo leh xirfado kala duwan, iyo waayo-aragnimo ah ee shaqo raadinta u kala duwan tahay oo dhan oo naga mid ah.
Dadka qaarkood, waa waayo-aragnimo ah exhilarating. Laakiin qaar kale, shaqo raadinta waa dhib iyo xanuun. Si kastaba ha ahaatee, shaqo raadinta waa mid muhiim u ah na ay ku guulaystaan ​​oo ay dhisaan our noloshaada cusub ee America. In this article, Waxaan la wadaagi doonaan qaar ka mid ah talooyin kaa caawin kara in aad shaqo ama xirfad shaqo raadinta.
1. Qaado waxa la heli karaa, laakiin aysan ku qanci.
Waxaa laga yaabaa in ay adag tahay si aad u hesho shaqo ugu fiican ee bilowga. Tan iyo markii ay qaadanayso waqti badan iyo dadaal. Sidaas darteed haddii booska aad raadinayso jira aan la gaadhi, waa in aad samayn waxa loo baahan yahay in adiga iyo qoyskaaga. Bilowgii, hesho shaqo kasta oo meesha aad lacag ka dhigi kara. Dhanka kale, sii wadaan in ay raadiyaan jagooyin meesha aad horumarin karaan xirfado cusub iyo u helaan noocyo kala duwan oo waayo-aragnimo shaqo. Ha u hesho raaxo iyo degaan ka yar! Waa inaad had iyo jeer la raadinaya fursado fiican.
2. Raadi shaqo kaamil ah by raadinaya fursado fiican.
Markii qaar ka mid ah oo naga mid ah ku hesho shaqo, waxaan uga istaagi in our caadiga ah maalin kasta. Waxaan toos waqti isku mid ah, iyo tagno dadka isla shaqeeyaan si joogto ah. Tani waxa ay noqotay our zone raaxada, oo waxaan u degaan, waayo,. Haddii aynaan jeclaan booska aan hadda ka jirta nolosha, waa in aan had iyo jeer la raadinaya fursado fiican. Xitaa haddii aad daalan tahay shaqada ka dib. Qaado waqti waxoogaa ah in ay eegaan loox shaqo sida indeed.com ama monster.com si ay u arkaan haddii ay jirto kaalin kasta oo aad rabto inaad codsato. Qaadashada fasallada Ingiriisiga ee yaala laybareeriga degmadaada ama Kulliyadda bulshada caawin kara in aad loo horumariyo xirfadaha wada-aad, taas oo ka dhigi doonaa shaqo raadinta fudud.
3. Hagaaji nooc xirfad aad.
Haddii aad tahay nasiib ku filan oo ay ku nool yihiin ee dalka Mareykanka ayaa maanta, waxaad marin u leedahay fursado badan oo ay wax ku bartaan iyo in la dhiso nooc xirfad aad. Sidaa darteed, isagoo waxbarasho waa muhiim. Sidaas darteed haddii aadan helin aad shahaadada dugsiga sare, ka Barnaamijka GED free RCO ee kaa caawin doona inaad mid hesho. Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tababar gaar ah, waxaad ka heli kartaa maktabadda xaafaddaada ama internetka. Waxaad dooran kartaa, inay dugsiga dhigtaan, laakiin haddii aad u mashquul shaqo badbaadada dhigaya adag yihiin, waxbarashada internetka waa fursad weyn kuu. Waxaad kaloo uga qayb geli karaa bulshadaada by qaadashada door hogaamineed ama ku biirin barnaamijka hoggaanka a.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah website-yada aan u isticmaali waayo, horumarinta shakhsiyeed iyo xirfad. Koorsooyinka waxay leeyihiin ajuurada, laakiin haddii aad si dhab ah uga go'an in horumarinta xirfadeed iyo waa awoodaa inuu iyaga awoodin, maal naftaada in hadda kaa caawin kara inaad hesho mushahar fiican ka dib.
Udemy.com waa bogg internet waxbarasho oo aad ka baran karto iyo xariif xirfado cusub IT ee, ganacsiga, iyo beero maamulka, kuwo kale.
Coursera waa madal kale online waxbarashada meesha aad ka baran karaan xirfado cusub ka macallimiinta top jaamacad. Sidoo kale waxay leeyihiin koorsooyin oo aad ka baran kartaa Ingiriis iyo hagaajiyo xirfadaha xidhiidhka aad. Waxay bixiyaan shahaadada dhamaystirka in aad u sheegi kartaa on your resume.
4. Networking ayaa kaa caawin doona si aad u hesho shaqo kaamil ah.
Waxaa jirta odhaah ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in, “Your network ogaado doonaa qiimihiisu shabag.” Waxaan aaminsanahay inay tani tahay run maxaa yeelay, dadkii annaga qudhayadu waxaannu wareejin noo saameyn siyaabo qoto dheer. Waxay saamayn heerka sirdoonka our, caafimaadka, iyo dakhliga. Sidaa darteed, haddii group aad hadda ka mid ah asxaabta aan aad gacan ka gaaro himilooyinka aad raadinayso, waa in aad isku daydo inaad la kulanto dad cusub ku caawin kara.
Kulanka dad cusub waxaa laga yaabaa in marka hore handadaad. Laakiin way adag tahay in la helo shaqo sax ah oo aan isku xirka saxda ah.
Isticmaal warbaahinta bulshada door weyn ka ciyaari kara helidda shaqo kaamil ah. Isticmaal Facebook, meetup.com, iyo eventbrite.com si aad u hesho dhacdooyinka raqiis ah ama bilaash ah meesha aad degan tahay. Labis xirfad inta aadan dhacdada. Haddii aad dareento xishood, xusuuso qof walba waxaa jira ujeeddo oo isku mid. Hadalka bilaabin in dadka by naftaada soo bandhigid iyaga. Noqo cajiib ah iyo su'aalo ku saabsan search xirfadiisa ay ka codsan, shaqada, dugsiga, ama qoyska.
Si kale xirnaado la xiriir xirfadeed uu yahay by isticmaalka LinkedIn. Here are some USAHello Training Webinars on how to set up your profile and start looking for jobs on Linkedin:
LinkedIn lagacna Qaybta I. Sida loo Samee Up Your Profile LinkedIn
LinkedIn lagacna Qaybta II. Sida loo bilow Raadinta Job a Isticmaalka LinkedIn
Tabaruciddu waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee ay u koraan oo ay leeyihiin waayo-aragnimo cusub oo kaa caawin doona inaad wax amaahisaan shaqo kaamil ah.
Ficilka waqtiga aad la siiyo si ay ugu adeegaan dadka kale ka dhigi doonaa inaad dareentid wanaagsan. Intaa waxaa dheer, waayo-aragnimada aad iskaa wax u qabso laga yaabaa in albaabada cusub oo fursad furo. Your Tababaraha ama iskaa wax u qabso kale kaa caawin karaan talo ku saabsan raadinta mustaqbalkiisa. Ama waxa laga yaabaa inay awoodaan inay ku xirmaan qof ku caawin kara.
Raadi ururada bulshadaada in ka faa'iidi doonto waqti ama xirfadaha aad.
Waxaa jira wax badan oo loo baahan yahay caawinaad in bulshooyinka qaxootiga iyo soo galootiga. Waad ku tabaruci kartaa in xarumaha dib u dejinta, ama ururada waddaniga bulshada. Volunteermatch.com waa website a in kaa caawin doonaa helitaanka iskaa wax u qabso ama internship fursadaha ee magaalada aad ku.
6. maareynta waqtiga: In badan oo aad u koraan, fursadaha dheeraad ah waxaad u baahan doontaa.
Markan, waxaa muhiim ah in la qiimeeyo waxyaabaha mudnaanta idin sidaas ma aha taag darnaataa. Waxaa fiican in mudnaanta waajib qoyska, shaqada, iyo fursad iskaa wax u qabso sida aad u koraan si shakhsi ah iyo xirfad. Jaantuska sida badan shaqooyin aad doonaysaan inaad codsato in hal toddobaad waa, oo aad u sameeyeen aan loo eegayn waxa. Hayso liiska shaqooyinka aad codsatay in aad naftaada ku dhiiri.
Raac jaranjaro lix tallaabo ah si aad u hesho shaqo kaamil ah sida a qaxootiga / soo galootiga ah ee America. Waxaa la isku hubin in aad ka heli doonto shaqo fiican. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad sii hagaajinta xirfadaha, xirka, oo si adag uga shaqaynaysaa, waxaa ugu danbeyn bixin doonaa.
Information inuu kaa caawiyo inaad hesho shaqo iyo guulaystaan ​​shaqada.
About Muuse Idris
Muuse Idris waa qaxooti asal ahaan kasoo jeeda Eritrea. Isagu waa arday jaamacadeed oo aad rabtid in la furo ganacsi isaga u gaar ah mustaqbalka iyo waxa ay hadda qaadato doorka noqdo Guddoomiyaha ku dayasho mudan.